अब कस्ताे बन्ला मनहुँकाेट ? - Sankalpa Khabar
अब कस्ताे बन्ला मनहुँकाेट ?
२६ कार्तिक १०:१६
दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका-५ मानहुँकोटमा जग्गा विकासका लागि अध्ययन शुरु भएको छ ।
मानहुँकोटमा रहेका जग्गालाई व्यवस्थापन गर्दै विकास गर्ने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले सोमबारदेखि अध्ययन शुरु गरेको हो । मानहुँकोटको गुरुयोजना निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको नगरपालिकाले त्यसैका लागि जग्गाहरुको अध्ययन शुरु गरेको नगरपालिकाका इन्जिनीयर रवीन्द्रलाल मूलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक हप्ताको अवधिमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले ७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिफल…
कोरोनाले सिर्जना गरेको चुनौती सामना गर्न सरकार प्रयासरत छ:…
१५ मंसिर १३:०३
१४ मंसिर १०:३७
१३ मंसिर १६:४७